भदौ ४ गते सार्वजनिक विदा – Kavrepati
Home / समाचार / भदौ ४ गते सार्वजनिक विदा
admin August 18, 2021	समाचार Leaveacomment 110 Views
प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा कर्णाली सरकारले भदौ ४ गते सार्वजनिक विदा दिने भएको छ । उक्त दिन सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बन्द रहने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । भदौ ४ गतेलाई प्रदेश स्थापना दिवस तथा सहिद दिवससमेत मानिएको छ ।
अन्य समाचार : यी हुन् चर्चामा रहेका ५ नेपाली गायिका : तपाईंको मन पर्ने को ? नेपाली साङितिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय नयाँ नयाँ अनुहार देख्न सकिन्छ । अहिलेका युवा पुस्ताले संगीत क्षेत्रलाई निकै पछ्याएएका छन् । केही बर्ग त सानै उमेरमा चर्चाको शिखरमा पुगेका छन्। आज हामी नेपाली साङितिक क्षेत्रमा चर्चित ५ नेपाली गायिकाहरुको कुरा गर्छौ । जो निकै चर्चित र ब्यस्त छन् ।
1. समिक्षा अधिकारी – गायिका समिक्षा अधिकारी पछिल्लो समयक चर्चामा छिन् । उनले, स्वर भरेका धेरै गीतहरुले बजारमा राम्रो चर्चा पाएका छन् । तर, समिक्षाको चाहना गायिकामा मात्र सिमित हुने छैन । उनले, चलचित्रको पर्दामा नायिका बन्ने इच्छा पनि व्यक्त गरेकी छिन् ।१४ वर्षको उमेरमा चलचित्र ‘नाई नभन्नू ल ५’मा समावेश ‘बालापनको उमेर’ बोलको गीतमा स्वर दिएर गायनमा पाइला राखेकी समीक्षाले आफूलाई नायिका पनि बन्न मन लागेको बताइन् ।
2. रचना रिमाल – रचना रिमाल नेपाली संगीत क्षेत्रमा उदाउँदो नाम हो । रचनालाई अहिले फोटो फिरिममा…, मिनरल वाटर…, पहिलो पल्ट भेट हुँदा…, सुनन पियारी…जस्ता थुप्रै गीतले अहिले लोकप्रियको शिखरमा पु-याएको छ ।
रचनाको गायन इतिहाँस हेर्ने हो भने उनले यो यात्रा सुरु गरेको तिन वर्ष पनि पुगेको छैन । तर उनलाई नेपाल आईडल सिजन ३ ले छोटो समयमा एउटा उचाईमा पु-यायो । नभन्दै उनी अहिले व्यस्त गायिकाको सूचीमा छिन् । उनको पछिल्लो गीत फोटो फिरिममा हिट भएपछि रचनालाई दैनिक जसो गीत गाउन प्रस्ताव आईरहेको छ ।
3. एलिना चौहान – छोटो समयमै लोभलाग्दो सफलता हात पारेकी गायिका हुन् एलिना चौहान । लकडाउनको समयमा सार्वजनिक ‘के माया लाग्छ र’बोलको गीतपछि उनलाई फुर्सद मिलेको छैन । त्यसयता ४ दर्जन बढी गीतमा स्वर दिइसकेकी एलिनाका ‘मिनिरल वाटर’, ‘कुरा काट्ने मान्छेले काटुन’, ‘छेकेर माया छेकिन्न’, ‘मेरो परान’ लगायतका गीत चर्चित छन् ।
4. मेलिना राई – अहिलेकी नेपाली गीतसंगीतकी चर्चित र निकै ब्यस्त गायिका हुन् मेलिना राई । आफूले स्वर दिएका गीतहरुमा ‘लिप्सिङ’पनि दिन छायांकनस्थलमा पनि भ्याएसम्म पुग्ने गरेकी मेलिना निकै ब्यस्त नायिका हुन् ।पहिले सिनेमाको पाश्र्व ध्वनी, टेलिभिजन, एमफएममा मात्र भेटिने मेलिनालाई न कसैले चिन्थे, न कसैले बोलाउँथे ।
तर, ‘कम्मरमाथि पटुकी’ को लोकप्रियताले उनी सार्वजनिक भीडबाट अलप भए पनि एकाएक सेलिब्रेटी पो भइन् । ‘शीरैमा शीरबन्दी’, ‘तिमीले बाटो फेर्‍यौ अरे’, ‘कुटुमा कुटु सुपारी दाना’ जस्ता दर्जनौं गीतले मेलिनालाई झनै चर्चाको शिखरमा पुर्‍याईदियो ।
5. अस्मिता अधिकारी– गायिका अस्मिता अधिकारीको स्वरका जति प्रशंसकहरु छन्, उनको सुन्दरताको प्रशंसकहरु पनि उत्तिकै भेटिन्छन् । यी सुन्दरी पछिल्लो समयकी चलेकी गायिका हुन् । अस्मिताको उदय ‘नेपाल आइडल’ सिजन दुईबाट भएको हो । ‘नेपाल आइडल सिजन दुई’की थर्ड रनरअप अस्मिताले दर्जनौं हिट गीत सांगीतिक बजारमा दिईसकेकी छिन् ।
Previous लाइसेन्सको ट्रायल दिने प्रतिक्षामा बसेकाहरुलाई आयो अत्यन्तै खुसीको खबर !
Next फेसबुकमा लभ परेर भेट्न जाँदा आफ्नै बुहारी